Bacriminta Bacriminta Foliar Plus - doorashada ugu fiican ee dalagyada beeraha - Magazine Nidaamka Baradhada
Quudinta caleenta ayaa si adag u gashay tignoolajiyada dalagga beerashada sida ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee lagu buuxin karo yaraanta nafaqooyinka dhirta, kordhinta wax-soo-saarka iyo tayada badeecada. Hadda waxaa jira boqolaal dalabyo ah Bacriminta kala duwan ee suuqa - laga bilaabo milix fudud iyo humates, hagaajinta deficiency microelement kala duwan qaab dareere ah iyo foomamka biyo-milmi ah oo ku salaysan chelates synthetic, in Bacriminta saamaynta kicinta ku salaysan amino acids iyo xakameeyayaasha koritaanka.
Sannadkii 2006, kooxda Agroliga ee Russia waxay ahayd tii ugu horreysay ee Russia si ay u diiwaangeliso bacriminta ku salaysan amino acids ee asalka ah ee asalka ah ee ka soo saaraha Isbaanishka Agritechno. Fertigrain Foliar, oo ah bacriminta foliar ee dalagyada beeraha, ayaa noogu muuqatay midka ugu xiisaha badan iyo baahida suuqa. Horeba 15 sano ayaa la soo dhaafay, kala duwanaanta bacriminta ayaa si weyn u balaariyay, dalabyo badan oo tartan ah ayaa soo muuqday, laakiin saadaasheenna ayaa si buuxda loo xaqiijiyay - Fertigrain Foliar (Plus hoos diiwaangelinta cusub) waa badeecada ugu caansan ee macaamiisheena oo dhan Ruushka.
Foliar bacriminta loo isticmaalo ku dhawaad ​​dhammaan dalagyada beerta: badarka, galleyda, gabbaldayaha, xididdada sokorta, digirta, digirta, cawska waliga ah, iwm. Shuruudda ugu weyn ee waxtarka waa kororka wax-soo-saarka - tusaale ahaan, badarka celcelis ahaan waa 2-6 q/ha. Halabuurka bacriminta ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo sida dheeriga macdanta adag, ka hortagga magdhowga yaraanta suurtagalka ah ee microelements, iyo sidoo kale wakiilka kicinta iyo antistress, sababtoo ah ficilka amino acids bilaash ah ee asalka dhirta.
Sida caddaynta faa'iidada halabuurka ah ee Feertigrain Foliar in ka badan Bacriminta biyaha-qallalan ee qalalan, kuwaas oo sidoo kale loo isticmaalo beero badan oo loogu talagalay codsiga foliar, inta badan diiradda saaraya ay aad u awoodi karo, jaleecada hore, qiimaha, waxaan soo bandhigaynaa falanqayn isbarbardhigga qaar ka mid ah kuwa ugu badan. Noocyada caanka ah ee bacrimiyeyaasha la jeexjeexay (NPK + micro) ee ka soo baxa Ruushka iyo kuwa ajnabiga ah (Shaxda 1).
Isbarbardhigga halabuurka Fertigrain Foliar Plus iyo bacrimiyeyaasha foliar-ka-kakan ee biyaha-milmi kara ee warshado kala duwan.
Muujiyeyaasha Fertigrain Foliar Plus Tartamayaasha 1 Tartamayaasha 2 Tartamayaasha 3 Tartamayaasha 4 Tartamayaasha 5 Tartamayaasha 6
Foomka diyaarinta dheecaan Budada biyaha ku milma (ama granules)
walxaha organic 500,0
Wadarta amino acids 125,0
Oo ay ku jirto L-free 100,0
xubno badan Wadarta Nitrogen (N), oo ay ku jiraan: 62,5 170,0 210,0 60,0 200,0 200,0 180,0
Fosfooraska (P2O5) - 170,0 110,0 230,0 200,0 200,0 180,0
Potassium (K2O) - 170,0 210,0 350,0 200,0 200,0 180,0
xubno meso Sulfur (SO3) 70,4 138,0 39,0
Curiyayaasha yaryar Zinc (Zn) 9,38 0,35 0,15 2,0 0,5 0,8 0,1
Boron (B) 1,25 0,28 0,2 1,0 0,4 0,6 0,2
Copper (Cu) 1,25 0,5 0,1 2,0 0,3 0,4 0,1
Iron (Fe) 1,25 1,0 1,0 0,5 1,2 1,6 1,0
Isku geynta walxaha raadraaca 19,76 3,23 2,02 7,52 3,30 4,7 2,0
Badnaanta qiyaasta walxaha raadraaca ee la xidhiidha Fertigrain Foliar Plus 1,0 6,1 9,8 2,6 6,0 4,2 9,9
Markaad geliso halabuurka bacriminta ee aad isticmaasho miiskan, waxaad si fudud u xisaabin kartaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka. U fiirso isbarbardhigga marka la eego nuxurka microelements: Fertigrain Foliar, nuxurkoodu waa dhowr jeer ka sarreeya (laga bilaabo 2,6 ilaa 10), taas oo ah, codsi la mid ah tirada, ugu yaraan 3 jeer ayaa loo baahan doonaa. Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in isku-darka nafaqooyinka ee isku-dhafka amino acid-ka iyada oo loo marayo caleenta ay u dhacdo marar badan si dhakhso ah, ka dibna isku-darka isticmaalkooda ayaa kordhiya marar badan (eeg Shaxda 2).
Waqtiga isku darka dhirta 50% ee nafaqooyinka inta lagu jiro quudinta caleenta
Element Cusbada iyo oksaydhisku Chelates synthetic Iskudhisyada Amino acid
Nitrogen N 1-6 saacadood 1-6 saacadood <12 daq.
Fosfooraska P 15 maalmood 7-11 maalmood <2 saac
Potassium K 4 maalmood 2 maalmood <1 saac
Calcium Ca 6 maalmood 3 maalmood <2 saac
Magnesium Mg 5 h 1 h <1 saac
Sulfur S 12 maalmood 8 maalmood <2 saac
Birta Fe 2 maalmood 24 h <2 saac
Manganese Mn 2 maalmood 24 h <3 saac
Boron B 2 maalmood х <2 saac
Zinc Zn 3 maalmood 26 h <2 saac
Molybdenum Mo 2 maalmood х <2 saac
Hadda qaar ka mid ah soo-saareyaasha bacriminta biyaha-milmi kara waxay ku daraan walxaha gaarka ah si ay ugu sii hayaan bacriminta caleenta muddo dheer ilaa uu geedku nuugo nafaqooyinka sida ugu macquulsan. Laakiin kee fiican? Sug, ka walwalsan in roobku wax walba ka dhaqo caleenta, ama hubi in 1-2 saacadood ka dib codsiga, geedku wuxuu horey u helay wax kasta oo la siiyay?
Bacriminta biyaha ku milma oo ku salaysan chelates synthetic (EDTA, DTPA, succinic acid iyo kuwa kale) ayaa markii hore loo sameeyay ma aha codsiga foliar, laakiin codsiga waraabka - bacriminta iyo hydroponics, si loo hagaajiyo milanka marka la barbar dhigo noocyada cusbada ee Bacriminta, la yareeyo isku xidhka nafaqooyinka isku xidhka aan dheefshiidka lahayn iyo sii dheeraynta falkooda. Isticmaalkooda sida dhaymada caleenta ah waxay ahayd go'aan fiican maahan khabiirada beeralayda, laakiin kuwa suuq-geynta. Taasi waa sababta ay ku saleysan yihiin macronutrients NPK, soo bandhigida taas oo qiyaaso yar yar iyada oo loo marayo caleen weli si weyn u magdhabi karin baahida ay dhirta.
Fertigrain Foliar waxa ku jira wax yar oo nitrogen ah oo ka mid ah nafaqooyinka ugu muhiimsan, geedkuna wuxuu ka helaa fosfooraska iyo potassium-ka bacriminta ciidda ugu weyn iyada oo loo marayo xididka iyada oo kicinaysa awoodda nuugista ee nidaamka xididka sababtoo ah ficilka amino acids bilaash ah. Sidaa darteed, dooda ay guushu ku bacriminta chelated biyo-milmi ah ay sabab u tahay joogitaanka NPK iyaga ku jira ma dhawaaqo gebi ahaanba lagu qanci karo.
Faa'iido dheeraad ah oo ka mid ah Fertigrain Foliar ee bacriminta chelated ee biyaha ku milma qaabkooda diyaarinta waa in dhammaan bacrimiyeyaasha Agritecno ay yihiin dareere, taas oo ah, ma jiraan wax dhibaato ah oo ku milmay mabda'a. Laakiin marka la eego foomamka qalalan, dhibaato ayaa laga yaabaa inay soo baxdo, haddii, dabcan, cutubka xalinta dhexe loo isticmaalo beerta. Tusaale ahaan, dhaymada sare ee dalagyada jiilaalka waxaa badanaa lagu daraa herbicides marka heerkulka biyuhu aanu weli sare u kicin, aad bayna u dhib badan tahay in lagu milo 2-4 kg/ha biyo qabow, gaar ahaan marka la shaqaynayo hoos u dhac ku yimaadda qulqulka xalinta shaqada (50-100 l / ha ama xitaa ka yar). Marka la eego isticmaalka bacriminta Agritecno, dhibaatooyinka noocan oo kale ah ma soo baxaan, beeraha qaarkood xitaa waxay isticmaalaan ULV.
Waxaan soo koobeynaa faa'iidooyinka isticmaalka Bacriminta caleen Foliar bacriminta:
Saamaynta biostimulating iyo ka-hortagga walbahaarka sababtoo ah asiidhyada amino ee bilaashka ah;
Halabuurka curiyaha raadraaca ugu dheelli-tiran uguna uruursan;
Heerka gelitaanka dhirta oo sarreeya iyo dheefshiidka sare;
Samaynta dareeraha habboon;
Ku habboon taangiyada isku-dhafka ah ee sunta cayayaanka, ma jiraan kharashyo dheeri ah oo codsi ah;
La'aanta phytotoxicity ee dhirta;
Kordhinta wax soo saarka, hagaajinta tayada alaabta.
Fertigrain Foliar waxaa lagula talinayaa in loo isticmaalo wejiyada koritaanka dhirta ugu xoogan ee qiyaasta 0,5 ilaa 2 l / ha: badarka - beerista iyo bilowga madaxa, hadhuudh - 3-5 caleemo, gabbaldayaha - 4-6 caleemo, dabocase sonkorta - 4-6 caleemaha ka dibna 2-3 jeer oo u dhexeeya 10-14 maalmood, soybean: 2-3 trifoliate caleemaha, flax - "geedka Christmas", iwm.
Waqtigan xaadirka ah, bacriminta Agritecno waxaa matalaya in ka badan 30 bacriminta laga soo bilaabo dhowr sadar: Fertigrain, Tekamin, Teknokel, Controlfit iyo Teknofit pH. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamyada codsiga ee Fertigrain Foliar iyo bacriminta kale ee Agritekno, iyo sidoo kale natiijooyinka codsigooda, bogga internetka ee Agroliga of Russia Group of Companies. www.agroliga.ru
Si aad u iibsato ama la tashi dheeraad ah, fadlan la xiriir laanta shirkadda Agroliga ee kuugu dhow. Ha isku dayin inaad ka iibsato alaabtan alaab-qeybiye kale - Agroliga ee Kooxda Shirkadaha Ruushka waxay leeyihiin gaar u ah iibinta alaabtan dhulka dalkeena!
Tags: "Agritecno""Agroleague of Russia"Bacriminta ku salaysan amino acids-ka bilaashka ah ee asalka dhirtaFoliar bacriminta
Ruushka kama mamnuuci doono soo dejinta baradhada Shiinaha
Bandhigga 21-aad ee Beeraha Ruushku wuxuu ku soo bandhigi doonaa VDNKh guulaha ugu waaweyn ee warshadaha beeraha gudaha